सुन तस्करदेखि ठेकेदारसम्म गृहको सूचीमा ! विप्लव र सिके राउतमाथी कानुनी कारबाही | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
सुन तस्करदेखि ठेकेदारसम्म गृहको सूचीमा ! विप्लव र सिके राउतमाथी कानुनी कारबाही
| 174 Views | Published Date : 7th June 2018 |
काठमाडौं । गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले कार्यभार सम्हालेको मंगलबार १ सय दिन पूरा भयो । एक सय दिन पुगेको अवसरमा गृहमन्त्री थापाले बुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरे ।
कार्यक्रममा आफ्नो १ सय दिनलाई ‘हनिमुन’ अवधि भनेर विषय प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापाले विकास र समृद्धिका लागि सुशासन भन्दै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रको चर्चा र खुलासा गरे ।
विप्लव,सिके राउत,गोइत सुरक्षामा ठुलो चूनौती
गृहमन्त्री थापाले मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको बताउँदै विकासविरोधी र मुलुकमा विखण्डन निम्त्याउने विभिन्न समूह सक्रिय भएको बताए । उनले नामै किटेर विप्लवको अतिवादी सोच पनि विकासको गतिको वाधक भएको बताए ।
आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका खतराहरु को–को हुन त भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले भने–‘संविधान नमान्ने विप्लवको अतिवादी सोच, क्षेत्र र जातका नाममा विखण्डनको नारा लगाउने सिके राउत, गोइत, ज्वालासिँह, कश्यप विखण्डनका नाइके हुन्, उनीहरुले संविधान र कानुनविरोधी हर्कत गरिरहेका छन् ।” गृहमन्त्री थापाले धार्मिक रुपमा पनि मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने अभियानमा हिन्दुवादी समूह लागेको बताए । उनले भने, “धर्मको नाममा द्वन्द्व निम्त्याउन केही समूहले सन् २०२५ सम्म सबै मन्दिर भत्काएर चर्च बनाइन्छ रे भन्ने प्रपोगाण्डा गरिहेका छन् ।”
मुलकमा अस्थिरता निम्त्याउने कुनै पनि व्यक्ति वा समूहमाथी कानुनी उपचार खोजिने गृहमन्त्रीको चेतावनी छ ।
गुण्डाराज र तस्करीविरुद्ध धावा
गृहमन्त्री थापाले मुलुकमा अझै गुण्डाराज कायम रहेको बताए । गुण्डाराजको अन्त्य गर्न उनीहरुको पहिचान भइरहेको पनि गृहमन्त्रीले खुलाए । गुण्डाराजको अन्त्य गर्न गृहले विषेश अपरेसनको तयारी गरेको उनले बताए । गृहमन्त्री थापाले विभिन्न नाममा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्रालय लागेको बताए । उनले भने, “अहिले सीमामा हुने अवैध गतिविधि र तस्करी नियन्त्रणमा आएको छ । विस्तारै मुलुकमा सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ ।”
समृद्धिका ठूलो जोखिम मोल्यौं
गृहमन्त्री थापाले मुलुकमा सुसासन र सम्वृद्धिका लागि ठुलो जोखिम मोलेको बताए । उनले भने, “खासगरि तस्करी नियन्त्रण गर्न सानोतिनो कदम चालिएको होइन । यो ठुलो रिश्क पनि हो ।” विभिन्न क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताउँदै सरकार लागुऔषध पूर्णरुपमा निषेध, सीमा सुरक्षामा कडाई, हुण्डीवाल, तस्करी लगायतका अपराधिक र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष रुपमा लागेको बताए ।
सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ पर्छन्
गृह मन्त्री थापाले सुन तस्करीका बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै त्यसमा संलग्न ठूला माछा पनि पक्राउ पर्न सक्ने बताए । “सुन तस्करीमा ठूला माछाको कुरा पनि आएको छ,” गृह मन्त्री थापाले भने, “माछा मार्ने काम जारी छ । भुरा माछा परेका छन् । अनुसन्धान जारी छ । ठुला माछा पनि समातिन सक्छन् । आशा गरौं ठूला माछा पनि पर्न सक्छन् ।”
उनले गृहले थालेको सुन तस्करीको अनुसन्धानले ठूला माछामा छट्पटी भएको बताए । उनले त्यसबाहेक अहिले अनुसन्धान जारी रहेकाले धेरै भन्न नमिल्ने बताए । सुनकाण्डको अनुसन्धान हचुवाको भरमा नभएको बताउँदै थापाले पूर्व प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धानप्रति गरेको टिप्प्णीमा आपत्ती जनाए ।
यसैबीच उनले समयका काम नगर्ने जो कोही कसैका घरधनी भए पनि कारवाही गरिने बताए ।